बाँसबारी– अथक प्रयास र फेरिएको स्वरुप - Mero Sabda
बाँसबारी– अथक प्रयास र फेरिएको स्वरुप
अहिले बाँसबारी क्षेत्र सितल र एकान्त खोज्दै जानेहरुका लागि गन्तव्य बन्दै गएको छ । घना बाँसघारी र रुखविरुवाको हरियालीले अनि उत्तर–पश्चिम भएर बग्ने विरिङ खोलाको पानी छोएर बग्ने शितल हावाका कारण वनभोज खानेहरुका लागि पनि गन्तव्य हुन थालेको छ । कौडीको मोल भएका जग्गाहरु दशौं लाख रुपैयाँ कठ्ठा पर्ने भएका छन् । गाउँ छाड्नेहरु फर्किन थालेका छन्, र नयाँ बस्ती विकास शुरु भएको छ ।
नमूना सामुदायिक वनभित्रको प्राकृतिक झिल बाहेक निर्माण गरिएका मध्ये सम्भवतः अर्जुनधारा नगरपालिकाकै सबैभन्दा ठूलो पोखरी त्यहीं छ । त्यो साढे दुई विगाह जग्गामा फैलिएको छ । त्यहाँ आन्तरिक पर्यटनका लागि बोटिङ गराउने तयारी शुरु गरिएको पराजुली बताउँछन् । त्यसै गरी वनभोज र बाल उद्यानको काम पनि युवाहरुको अगुवाइमा शुरु गरिएको छ । उनी भन्छन्, ‘सिर्जनशील तथा वेरोजगार युवाहरुलाई गाउँमा नै रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले युवाहरुको उपसमिति गठन गरी गाउँलाई नै पर्यटन क्षेत्र बनाउन लागिएको छ । त्यसो गर्न सकेमा केहीले जागिर र केहीले व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ ।’
खोलाको पारीपट्टि ५ नं. वार्ड पर्छ, वारी ६ नं. । सय मिटर खोला वारिपारिको सम्पर्क थिएन । पारिबाट वारि आउन झण्डै तीन किलोमिटर घुम्नु पर्ने वाध्यता थियो । त्यस दूरी मेटाउन डिएमसीको पहलमा भर्खरै १६३.९५ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भइ उद्घाटनको पर्खाइमा छ । स्वीस र नेपाल सरकारको साझेदारीमा झोलुङ्गेपुल महाशाखाले झण्डै एक करोड २० लाखको लागतमा उक्त पुल निर्माण सम्पन्न गरेको हो । हाल पुल हेर्न आउने र दैनिक उपयोग गर्नेहरु गरी झण्डै हजार जनाले प्रत्येक दिन पुल वारिपारि गर्छन् । जसले गर्दा त्यहाँका होटल र पसलहरु राम्रोसँग संचालन शुरुवात् भएका छन् ।
खोला धारको आठ हेक्टर जग्गा यतिखेर डिएमसीको संरक्षणमा छ । नगरभित्र युवाहरुका लागि विभिन्न पर्यटन क्षेत्रहरु छन्, त्यसै गरी जेष्ठहरुका लागि धार्मिक स्थलहरु पनि छन् । उक्त क्षेत्र भने बालबालिकाहरु समेतको लागि गन्तव्य स्थल बनाउने योजना रहेको पराजुली बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नगरको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक सम्पत्ति मध्ये पर्छ यो पनि । यसलाई रोजगारीमूलक बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान जानै पर्छ । त्यसैले हामी लागेका छौं । अहिले यहाँ आउने सानो संख्यालाई चाँडै नै ठूलो संख्या बनाउने योजना छ ।’
राम्रा योजना र इमान्दार एक व्यक्तिले गाउँको मुहार फेर्न सक्छ । हरेक क्षेत्रको आआफ्नै विशेषता छन् । विशेषता पहिचान गरेर सम्भावना तर्फ अग्रसरता देखाउने हो हरेक गाउँ सुविधा सम्पन्न बनाउँदै रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना गर्दै लान समस्या नहुने उदारहण बन्दै गएको छ बाँसबारी क्षेत्र ।